01. Hordhac iyo Al-faatixa
DAAWO VIDEO:- Maamulka Somaliland oo ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray Prof. Cali Khaliif Galeyr.
on September 09 2013 Maamulka Somaliland ayaa si kulul uga jawaabay eedeymo kaga yimid Prof. Cali Khaliif Galeyr oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaaliya, wuxuuna Somaliland ku eedeeyay inay xasuuq iyo faquuqid ku haayaan shacabka kasoo jeeda Khaatumo State.
Wasiirka arimaha gudaha ee maamulka Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo wareeysi siiyay TV-ga Somali Channel ayaa eedeymahaasi oo dhan uu usoo jeediyay Prof. Cali Khaliif Galeyr ku tilmaamay kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in deegaanada uu ka arimiyo Somaliland ineysan ka jirin in dadka qaar isir ahaan loo faquuqo ama loo dhibaateeyo, wuxuuna xusay in bulshada reer Somaliland ay yihiin mid qura islamarkaana uusan jirin wax farqiya oo u dhexeeya.
DAAWO WAREEYSIGA LALA YEESHAY CALI WARAN CADDE
Cali Maxamed Waran Cadde oo ah wasiirka arimaha gudaha ee maamulka Somaliland ayaa kula taliyay Prof. Cali Khaliif Galeyr inuu ka fiirsado waxyaabaha uu ku hadlayo, wuxuuna meesha ka saaray in maamulka Somaliland uu bartilmaameedsanayo dadka kasoo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Ceyn.
Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa Somaliland ku eedeeyey inay dhibaatooyin gaara ku hayso dadka kasoo jeeda gobalada Sool, Sanaag iyo Ceyn, isagoona tusaale usoo qaatay inay xabsiyada ka buuxaan dad u badan caruur iyo haween kasoo jeeda deegaanadaas oo sida uu sheegay kusoo duulay maamulka Somaliland.